दूधमा तुलसीको पात उमा`लेर पिउँदा हट्नेछ पत्थ`री !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lifestyle/ Health/दूधमा तुलसीको पात उमा`लेर पिउँदा हट्नेछ पत्थ`री !!
दूधमा तुलसीको पात उमा`लेर पिउँदा हट्नेछ पत्थ`री !!
औषधीय गुण भएको वनस्पति तुलसी हरेक रोगको औषाधि मानिन्छ । आयु`र्वेदमा समेत तुलसीलाई विभि`न्न रोगको अचुक औषधिका रुपमा लिइएको छ । चिकित्सकका अनुसार समेत तुलसीमा सयौँ रोग निको पार्ने क्षमता हुन्छ । यसका पात, हाँगा, फूल, जरा, बीउ सबै उत्तिकै महत्व छन् । यसले भोक जगाउने, रुची जगाउने तथा पाचन क्रिया बढाउनुका साथै झाडा`वान्ता पनि रोक्ने कार्य गर्दछ । यस्छा छन् फाइदा-
हृद`य रोगमा : दूधमा तुलसीको पात उमालेर नियमित सेवन गर्दा हृ`दय रोगीलाई निकै फाइदा गर्छ । त्यति मात्र होइन, यसले मुटुलाई स्व`स्थ राख्न पनि सहयोग गर्छ ।
पत्थरीको समस्यामा : यदि कुनै व्यक्तिलाई प`त्थरीको समस्या छ भने दूधमा तुलसीको पात उमालेर खाली पेटमा पिउनुपर्छ । यसो गर्नाले मिर्गौलाबाट पत्थरी हट्छ ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता : तुलसीको पातमा एन्टिअ`क्सिडेन्ट गुण पाइन्छ, जो हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ । यतिमात्र होइन, यसमा क्यान्सर पैदा गर्ने कोशिकासँग लड्ने क्षमता पनि हुन्छ । यसका साथै तुलसीको पातमा एन्टिब्या`क्टेरियल एवं एन्टि`भाइरल गुण हुन्छ ।
दम रोगमा फाइदा : यदि तपाईं श्वा`सप्र`श्वाससँग सम्बन्धित समस्याले ग्रस्त हुनुहुन्छ भने दूधमा तुल`सीको पात उमालेर पिउनु लाभदायक हुन्छ । नियमित रुपमा तुलसीको पात दूधमा उमालेर सेवन गर्दा दम रोगमा फाइदा गर्छ ।
माइग्रेनमा राहत : दूधमा तुलसीको पात उमालेर पिउँदा टाउको दुखाई वा मा`इग्रेन जस्ता समस्याबाट पनि राहत मिल्छ । नियमित रुपले यस औषधि सेवन गर्दा समस्याको जड नै ठीक हुनसक्छ ।
तनाव वा डिप्रेसनमा : यदि तपाईंमा तनाव वा डि`प्रेसनको समस्या छ भने पनि दूधमा तुलसीको पत्ता उमालेर सेवन गर्न सक्नुहुन्छ, जो निकै लाभदायक हुन्छ । तनाव एवं चिन्ता कम हुन्छ । डिप्रे`सन रोगीका लागि पनि यो लाभदायक हुन्छ ।
७ कागती प्रयोग गर्ने आश्चर्य जनक तरिका, देखाउनै लाज लाग्ने हात होस् या अनुहार एक छिनमै सफा